Izinombolo ze-iPhone 11 Pro Max Model A2161, A2218, A2220 - Amagajethi
I-iPhone 11 Pro Max ingenye yamadivayisi athandwa kakhulu atholakala emakethe. Izintengo zizokwehla kungekudala. Ukwethulwa kwe-iPhone yakamuva kunciphisa izindleko zesizukulwane esedlule. Kunamathani amamodeli ayingqayizivele atholakalayo edivayisini. Kulo mhlahlandlela, sizoxoxa ngezinombolo eziyimodeli zedivayisi. I-Apple yethula izinhlobo ezahlukahlukene zedivayisi efanayo, ngokuya ngezidingo zesifunda.
I-Pro max inesikrini esikhulu, okuyindawo enhle yokuthengisa yedivayisi. Abasebenzisi abaningi banethemba lokuthola le divayisi.
Imininingwane ye-iPhone 11 Pro Max:
Izinombolo ze-iPhone 11 Pro Max Model zifaka i-A2161, A2218, A2220. Lezi zinhlobo ezintathu zehlukile ngendlela yazo. Izici ezibalulekile zamadivayisi zihlala zinjalo. I-iPhone 11 Pro Max inikeza ukunemba kwekhwalithi ephezulu nokusebenza okuhle. Ake sixoxe ngezici ezijwayelekile ezitholakalayo zabo bonke abasebenzisi be-iPhone 11 Pro max. Lokhu kuzokusiza ukuthi wenze isinqumo esingcono ngenkathi uthenga. Uhlobo lwePro luchaze indlela abasebenzisi ababone ngayo i-iPhone kusukela ngonyaka odlule.
Amamodeli we-iPhone 12 Pro Max A2342, A2410
Izindlela ezi-10 ezihamba phambili ze-iTunes
I-iPhone 11 Pro max ingelinye lamadivayisi we-Apple okuqala eza nombukiso omkhulu. Inombukiso ovelele kakhulu ku-6.5 ’’. Kuyamangalisa ukusetshenziswa kwakho okujwayelekile. Noma ngubani angasebenzisa lezi zikrini eziningi ukujabulela okuqukethwe kalula. Abasebenzisi bathola indawo yokusakazwa kalula nokudlala kungxenyekazi yabo.
Usayizi omkhulu wesikrini futhi ukunika indawo yokujabulela ukubuka okulula. Futhi kuyisibonisi esikhulu se-retina XDR OLED. Ikhwalithi yesithombe izoba mnandi futhi icace.
Uthola ukusethwa kwekhamera kathathu ngale divayisi emnandi, efanele ukusetshenziswa isikhathi eside. Abasebenzisi bangakusebenzisa lokhu ukuqinisekisa ukuthi bathola izithombe ezisezingeni eliphakeme. Uhlelo lukulungele ukukhanyiswa okuphansi kokukhanya nezinye izimo eziningi. I-Apple inaka kakhulu imininingwane emincane. Uyabona ukuthi amakhamera akutholela izithombe ezibukhali nezinembile.
Kubuye kube kuhle kumavidiyo we-4K nokuqukethwe okubanzi kakhulu. Ukusetha kwamalensi amathathu kukunikeza ukwehluka ezithombeni nakumavidiyo.
3. I-ID yobuso
Abakwa-Apple benza ubuchwepheshe babo be-Face ID phambili kwezokuphepha. I-iPhone 11 Pro Max isebenzisa lokhu ngokuzikhandla. Abasebenzisi bangavula kalula amadivayisi abo ngale ndlela elula yokusebenzisa. Kuyindlela ephumelela kakhulu kepha idinga ukuthi ukhombise ubuso bakho phambi kwekhamera.
I-Apple ibuyisa ukuvulwa kwephini kubasebenzisi ababhekene nenkinga nge-Face ID ngenxa yokuthandwa kwe-2020.
Imodeli ye-iPhone 11 Pro Max nayo isebenza kahle kakhulu ngokusetshenziswa kwamandla. Awudingi ukuyikhokhisa ngaso sonke isikhathi. Abasebenzisi bathola ishaja ebhokisini ngalokhu kuthenga. Ingilazi emuva ikuvumela ukuthi uthwebule ifoni ngokungenantambo. Kuyisengezo esihle kakhulu sabasebenzisi abanethemba lokusika imfuhlumfuhlu. I-chip ye-A13 iqinisekisa nokuthi ukuphathwa kwamandla kubalulekile.
Lezi ngezinye zezici ezijwayelekile ozozithola ngamamodeli we-iPhone 11 Pro Max. Njengamanje, ungathenga i-iPhone 11 Pro max ngamanani aphansi. I-iPhone 12 izoholela ekwehlisweni kwamanani emhlabeni wonke.
Izinombolo ze-iPhone 11 Pro Max Model:
Lesi sigaba sizobheka imininingwane ethile mayelana namamodeli we-iPhone 11 Pro Max. Izinhlobo ezintathu ziyatholakala ezifundeni ezahlukahlukene zomhlaba. Ungahlola ukuthi iyiphi imodeli etholakalayo engxenyeni yakho. Nayi imininingwane okufanele uyazi.
IPhone 11 Pro Max A2161 iyimodeli etholakalayo ukuthengiswa e-USA. Yinguqulo ethandwa kakhulu njengamanje phakathi kwabasebenzisi. Iphinde yande kakhulu eCanada, ezindaweni zase-US Virgin Island nasePuerto Rico. Ucingo luhambisana nawo womabili amanethiwekhi we-GSM ne-CDMA akulezi zifunda. Uhlobo oluvuliwe lwedivayisi lungaqhuba kahle noma yiliphi ikhadi le-sim. Ifoni isekela izinzuzo ezimbili ze-sim zabasebenzisi bazo. Ungaba nabathwali ababili abahlukene ngokuthenga kwakho. Isici se-sim nesimilo senza izinzuzo ezimbili ze-sim.
I-iPhone 11 Pro Max A2218 inguqulo edume kakhulu emazweni amaningi aseYurophu nase-Asia. Abasebenzisi bangathola le modeli e-Australia, UK, France, Singapore, naseTaiwan, njll.Kuvame kakhulu naseJapan. Abasebenzisi bangasebenzisa imodeli kalula. Uhlobo lwesiJapane lunomsindo we-shutter lapho abasebenzisi bachofoza izithombe. Ukuhlelwa kuphinde kusekele ama-sim amabili wokuxhumana okufinyeleleka. Ingabizwa ngokuthi inguqulo ye-EU ye-iPhone. Izithwali ezisekelwa yile divayisi ziyahlukahluka kusuka esifundeni kuya esifundeni.
Uhlobo lwe-A2220 lwe-iPhone lutholakala kuphela ezifundeni zaseChina naseHong Kong. Izwe linemithetho eqinile yamadivayisi asekelwa yi-inthanethi. Abasebenzisi kufanele batshale imali enguqulweni eyingqayizivele ye-iPhone. Idivayisi isekela izici ezimbili ze-sim kepha ngaphandle kwe-esim ejwayelekile. Abasebenzisi bathola ithreyi lesibili lesibili lomzimba ku-iPhone yabo.
Imodeli futhi isekela kuphela abathwali abanqunyelwe baseChina nabaseHong Kong.Le yimininingwane ebucayi mayelana namamodeli we-iPhone 11 Pro Max. Sithemba ukuthi umhlahlandlela wethu uphendula yonke imibuzo yakho ngokufanayo.
I-iPhone 11 Pro Max iza nezinhlobo eziningi zemodeli ezihlukile. Izinhlobo ezintathu eziyinhloko zimbozwe kulo mhlahlandlela.
Abasebenzisi bangahlola umehluko ngokushesha ngale ndatshana. Siyethemba manje usungathenga okunengqondo ngokuya ngesifunda sakho.
Ibhokisi le-Android TV elihamba phambili
Izindawo ezihamba phambili ze-Anime 2020
Ingabe i-Overwatch Cross Platform? Ukuvuselelwa Kwamuva (2020)
Igundane elihamba phambili le-COD lempi yanamuhla (2020)
Indlela ukuguqula Mov MP4?
I-Adobe Creative Cloud Yabafundi - Thatha Isaphulelo Esikhethekile
Imidlalo Engavuliwe 2020 - Amasayithi ama-5 Ahamba phambili Okudlalwa Ku-inthanethi